Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Al Qaeda, Fanjakana Islamika manao iraka hamono ao amin'ny faritr'i Mopti any Maliana any Venise
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Mali • Vaovao • Safety • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Olona tsy manan-tsiny miisa 31 tao anaty fiara fitateram-bahoaka tao Mopti, Mali no nisy niharan’ny fanafihana omaly.
Ny tanànan'i Mopti ao amin'ny firenena Afrikana Andrefana ao Mali dia fantatra ho iray amin'ireo faritra miavaka sy be loko indrindra ao amin'ny firenena. Ankehitriny dia iray amin'ireo faritra mahafaty indrindra any Mali.
Mopti,” Venise Maliana”, no renivohitry ny faritra fahadimy. Ity nosy ity dia iray amin'ireo seranana be mpampiasa indrindra amin'ny Reniranon'i Niger. Faritra fizahantany par excellence io.
Ny faritra dia vilany fandrahoan-tsakafo, voaforon'ireo foko samihafa izay miara-miaina. Ny fiteny mahazatra ao amin'ny faritra dia ahitana ny Fulani, Bambara, Dogon, Songhai, ary Bozo.
Ny fizahan-tany dia indostria vao misondrotra miaraka amin'ny Air Mali manidina mankany Mupti avy any Timbuktu sy Bamako, ary fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'ny lalana miloko avy any Mupti mankany amin'ny renivohitr'i Bamako.
Ny faritra izao dia ivon'ny herisetra ao Mali atosiky ny mpikomy mifandray amin'ny al Qaeda sy ny Fanjakana Islamika.
Omaly, nahafaty olona 31 farafahakeliny tao afovoan'i Mali ny mpitolona rehefa nitifitra fiara fitateram-bahoaka nitondra olona ho any amin'ny tsena ao an-toerana, hoy ny manampahefana ao an-toerana - ny fanafihana farany nahafaty olona tany amin'ny faritra iray fantatra sy fehezin'ny fikomiana mahery vaika. Notafihan'ny jiolahy tsy fantatra ilay fiara fitateram-bahoaka raha nandeha indroa isan-kerinandro avy ao amin'ny tanànan'i Songho mankany amin'ny tsena iray ao Bandiagara, 10 kilometatra (6 kilaometatra). Notifirin’ny lehilahy nirongo fiadiana ilay fiara, notapahiny ny kodiarany ary nitifitra ny olona.
Mali no be mpitia indrindra amin'ny vakoka iraisam-pirenena any Afrika. Ny moske Djingary Ber sy Sankore any Timbuktu, Ny moske an'i Djenne, ny firenena Dogon, ny fasan'i Askia any Gao, ary ny Jaaral sy Degal ao Diafarabe sy Dialloube dia samy neken'ny fianakaviambe iraisam-pirenena avokoa tamin'ny alalan'ny fampidirana azy ao amin'ny UNESCO World Heritage.
Ireo toerana ara-kolontsaina malaza ireo dia nanampy tamin'ny tontolo tsara tarehy, faritra sy vohitra mareva-doko sy miloko marevaka, ary ny Delta afovoan'i Niger miaraka amin'ny rafitra vita amin'ny tany sy ny toerana misy azy Ramsar izay mampiantrano vorona an'arivony isan-taona, ny efitr'i Sahara izay ny hatsaran-tarehiny, amin'ny toerana sasany, ny fientanam-po. mitombo rehefa mandeha manerana ny firenena ianao.
Noho ny toerana misy azy ara-jeografika, ny tantarany ary ny kolontsainy, dia firenena miompana amin'ny fizahantany sy ny asa tanana i Mali.
Manana kolontsaina manankarena i Mali ary mankalaza Fetibe isan-karazany mandritra ny taona any amin'ny faritra samihafa ny firenena: fetiben'ny kolontsaina, fetiben'ny mozika, fetibe ara-pivavahana, izay nandaminana ny sehatra fifanakalozan-dresaka nandraisan'ireo vahiny avy amin'ny kaontinanta rehetra.
Mampitandrina ny Masoivoho Amerikana: Aza mandeha any Mali noho ny heloka bevava, ny fampihorohoroana ary ny fakana an-keriny.
Nilaza i Ned Price, mpitondra tenin'ny Departemantan'i Etazonia: Manameloka mafy ny fanafihana sivily ny sabotsy teo akaikin'i Bandiagara, Mali, izay nahafatesana 31 ary naratra 17 i Etazonia. Maneho fiaraha-miory lalina amin'ny vahoaka Maliana izahay ary hanohy hiara-miasa amin'izy ireo amin'ny fikatsahany ny hoavy azo antoka, miroborobo ary demokratika.